Habsocodka Magangelyada | CGVS
Bilaabid habsocod magangelyada
Waxaa jira saddex nooc oo aad magangelyo uga dalban karto Biljim:
Kaddib markii aad timaado Biljim, xarunta diwaangelinta ‘Qasriga Yar’ ee xafiiska laanta socdaalka (DVZ/OE). Halkaan waxaad ka akhrin kartaa sida aad tani u sameyn karto.
Xududuudaha waxaa jooga laanta xuduudaha, tusaale ahaan sida madaarka/garoonka diyaaradaha.
Hadii aad Xabsi ku jirto waxaad magangelyo weydiisan kartaa agaasimaha xabsiga ama qof ka mid ah shaqaalaha xabsiga, haddii aad halkaas ku sugantahay.
Kama dalban kartid magangelyo adiggoo dibada ku sugan.
Waxaa waajid kugu ah inaad magangelyo dalbadado xabsiga dhexdiisa. Tani ma sameyn kartid adiggoo matalaya qof kale. Waxaa lagula darayaa carruurtaada ka yar 18 sano jir ee kula yimid Biljim habsocodka magangelyo inaad waarid u tahay.
DVZ/OE waxay ku diwaangelinaysaa codsigaaga magangelyo ‘Qasriga Yar’ waxaana dhici doona sidan hoos ku qoran:
Baaritaan amniga ah.
Waxaa la hubinayaa aqoonsigaaga/ qofka aad tahay. Iska xaqiiji inaad soo bandhigto dhammaan waraaqahaga aqoonsiga ah.
Waxaa la hubinayaa haddii aad u baahan tahay turjubaan iyo luqadda aad u baahantahay. DVZ/OE waxay go'aansanaysaa in habsocodka magangelyo uu noqon doono Nederlaan ama Faransiis midkood.
Waxaa la qaadayaa farahaaga iyo sawir si loo hubiyo inaad ka diwaangashantahay wadan kale oo Yurub ah (Eeg waxa loo yaqaano baaritaanka Dublin).
Fedasil waxay eegaysaa in aad u xaq u leedahay inaad joogto xarun qaabilaad iyo in kale. ka akhri wax dheeraad ah websiteka Fedasil.
Laga soo bilaabo bilowga habsocodka magangelyo, waxaad dalban kartaa qareen/abuukaate. Caawimadan sharciga ah waa lacag la'aan haddii aadan haysan awood dhaqaale oo kugu filan. Halkaan ka akhri sida aad u dalban karto caawimaad qareen/abuukaate.
Baarista Faraha ee Dublin
Iyadoo lagu saleynayo wareysiga, farahaagii iyo haddii gal ku gal/fiise aad ka heshay wadan ka tirsan yurub, DVZ/OE waxay eegaysaa in Biljim ay masuul ka tahay iyo in kale inay ka shaqeyso codsigaaga magangelyo (baaritaanka Dublin):
Haddii wadan kale oo yurub ah uu masuul uu ka yahay codsigaaga, DVZ/OE waxay weydiisan doontaa wadankaas in uu la wareego codsigaaga. Haddii uu wadankaas aqbalo in uu la wareego codsigaaga, waa in aad dib ugu noqoto wadankaas. Haddii aadan ku raacsaneen go’aankaan, waxaad ka xareysan kartaa racfaan/abiil Golaha Dacwad Oogida ee Sharciga ajnabiga (RvV/CCE). Waydiiso qareen/abuukaate inuu ku caawiyo, hubi inaad ilaaliso wakhtiga uu ku egyahay sharci ahaan.
Hadii ay Biljim masuul ka tahay inay sii wado codsigaaga, the DVZ/OE waxay kugu casuumi doontaa wareysiga koobaad haddii ay sidaas dhacdo habsocodkii Dublin waa la xirayaa, waxaana lagu marsiinayaa habsocodka magangelyo ee Biljim.
Hadii aad magangelyo ka heshay wadan kale oo Yurub ah, Biljim waxa ay u qaadanaysaa in aad nabadgalyo ku haysato dalkaas. Haddii ay dhacdo xaaladaas oo kale Biljim waxay baaritaan ku sameen doontaa oo kaliyah sababta aadan ugu laaban karin wadankaas kale ee Yurub.
Goobta DVZ/OE waxaad ku buuxin doontaa foom su'aalo ah oo ku saabsan waxyaabaha baahiyaha gaarka ah habsocodka. Tani waxay la xiriirtaa sababaha ay kugu adagtahay inaad raacdo habsocodka magangelyada. Haddii loo baahdo, CGRS waxay qaadi doontaa tallaabooyin taageero oo ku habboon.
Tusaale ahaan, Haddii aad qabto dhibaatooyin jir ahaaneed, oo ay kugu adagtahay inaad fuusho jaranjarooyinka. Markaas, wareysiga wuxuu ka dhacayaa dabaqa hoose. Haddii aad qabtid dhibaatooyin nafsiyan ah, waxaa dhici karta in la qorsheeyo dhowr wareysi ama nasasho dheeri ah ayaa lagu soo dari doonaa. Haddii, dhibaatooyinki wadankaaga ka jiray awgeed aad ku faraxsantahay in uu ku wareysto nin ama haween, CGRS waxay hubin doontaa in nin ama haween turjubaan ah iyo in qofka ku wareysinayo uu noqdo nin ama haween.
Diyaargarowga wareysiga labaad
Maxay qabataa CGRS?
Ka dib wareysiga koowaad ee ka dhacaya DVZ/OE, feylkaaga waxaa loo diri doonaa Xafiiska Wakiilka Guud ee Qaxootiga iyo Dadka Dalalka laheyn (CGRS). CGRS ayaa markaa qiimeyn ku samayn doonta codsigaaga magangelyo. Tan macnaheedu waxa weeye in CGRS ay eegi doonto in magangelyo lagu siiyo iyo in kale sabab la xiriirta adiggoo baqaya:
ciqaab sabab la xiriirta darteed wadanka aad u dhalatay, asalkaaga, diin, feker siyaasadeed ama inaad xubin ka tahay koox bulsho gaar ah;
dagaal ama rabshad;
jirdil ama xaqiraad ama dhaqan bini'aadanimo ka baxsan.
CGRS waa hay'ad madax-bannaan. Tani waxay ka dhigan tahay in CGRS ay tahay mid aan eex lahayn, ma jirto cid u sheegi karta go'aannada ay tahay inay qaadato CGRS.
Waqtiga sugitaanka wareysiga labaad
CGRS waxay kugu casuumi doontaa ugu yaraan hal wareysi. Waxaa dhici karta inaad sugto waqti dheer in lagugu casuumo wareysigaan. Habka ay CGRS ugu casuunto codsadayaasha wareysigooda ma go'aamin doonto taariikhda aad codsatay magangelyada. Sidaa darteed waa suurtagal in codsadayaasha soo gudbiyay codsigooda xilligaaga kaddib iyaga la hor wareysto.
Wakhtiga sugitaanka wuxuu ku xiran yahay dhowr arrimood. CGRS waxay bilaabi kartaa oo keliya qiimeynta marka ay DVZ/OE u soo dirto feylkaaga. CGRS waxay isku dayi doontaa inay qorsheyso wareysigaaga afar bilood gudahood kadib marka ay hesho feylka. Codsadeyaasha ka imanaya waddan nabadgelyo ah ama ku nool xarun xiran, wuu ka yaraan doonaa dib u dhacaan. Sababo la xiriira kororka tirada codsiyada magangelyada waxaa jiri karta dib u dhac. Sababtaas darteed, dhammaan codsiyada laguma eegi karo muddo gaaban gudahood waqtiga sugitaankana waxa dhic karta inuu gaaro hal ama mararka qaarkood xitaa labo sano . Si kastaba ha ahaatee, CGRS weli waxay isku dayeysaa inay sameyso wax kasta oo suurtagal ah si loogu casuumo dhammaan codsadayaasha wareysi sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogal ah.
La cala, u isticmaal waqtiga aad sugayso wareysiga qaab faa iido leh:
Ku wargeli CGRS haddii aad qabtid baahiyo gaar ah.Haddii aad leedahay baahiyo gaar ah oo aadana ku sheegin tan wareysigaaga hore ee DVZ/OE, iska xaqiiji inaad inaad ku wargeliso CGRS, iyadoo markaas qaadi doonta tallaabooyinka ku habboon. Waydiiso caawimaad qareenkaaga /abuukaatehaaga ama adeegaha bulshada.
La xiriir qareenkaaga/abuukaatahaaga. Caawimaada qareenku/abuukaatahaagu waa mid lacag la'aan ah haddii aadan haysan awood dhaqaale oo kugu filan. Diyaari wareysiga adiggoo kaashanaya qareenkaaga/abuukaatahaaga. Isaga / iyada waxay kaa caawin doontaa inaad qaabeyso sheekadaada iyo xaqiiqooyinka si hab isxigxiga ah.
Isku soo aruurso/ diyaarso dukumiintiyo iyo caddeyn haddii aadan soo gudbin dhammaan dukumiintiyadaada intii lagu jiray wareysiga koowaad, xaqiiji inaad u isticmaasho waqtiga sugitaanka inta u dhexeysa wareysiga koowaad iyo kan labaad inaad isku soo uruursato/diyaarsato dhammaan dukumiintiyada cadeynaya qofka aad tahay iyo meesha aad ka timid. Dukumiintiyada ugu muhiimsan waxaa kamid ah tusaale ahaan baasaboorkaaga ama kaarkaaga aqoonsiga. Haddii aadan haysan wax dukumiinti aqoonsi ah, waxaad sidoo kale soo gudbin kartaa dukumiintiyo kale oo caddeyn kara aqoonsigaaga, sida dukumiintiyada aqoonsiga ee waalidiintaada ama buuga yar ee millatari. isku duwo/ diyaarso dhammaan dukumiintiyada muujinaya sababta aadan ugu laaban karin dalkaaga, tusaale ahaan dukumiintiyada sharciga ah. Isku taxaluuji oo samee wax kasta oo suurtagal ah in dukumiintiyada asalka ah/orjinaalka laguu soo diro, xaqiiji inaadan reebin wax dukumiinti ah. Soo gudbi dukumiintiyada ka hadlaya xaaladaada shaqsiyeed. Lagaama doonayo inaad soo gudbiso dukumiintiyo ka hadlaya xaalada guud ee wadankaaga. Waa lagaa hubaa in CGRS ay ka warqabto xaaladda waddankaaga. Haddii aadan soo gudbin wax dukumiintiyo ah, waa inaad sharaxdo sababta keentay inta lagu guda jiro wareysigaaga CGRS.
Isku diyaari maskax ahaan. Inta lagu guda jiro wareysiga labaad, waxaa lagu weydiin doonaa su'aalo ku saabsan dhibaatooyinkii wadankaaga aad kala kulantay, kuwaasoo laga yaabi in ay taabtaan shucuurtaada
Sheeg sheekadaada. Ha sheegin sheeko qof kale leeyahay ama laguu soo jeediyey laakiin sheeg waxa adiga kugu dhacay shaqsi ahaan. Waxaa muhiim ah inaad sawir qayaxan ka bixiso xaaladaadii shaqsi ahaaneed. Ha raadin sheeko been abuur ah taasoo aad u maleynayso inay sare u qaadi karto fursada in aad hesho magangelyo. Waxaad qatar ah in lagu siiyo go'aan diidmo ah, iyadoo ay dhici kartay in dhibaatadii kugu dhacday shaqsiyan inaad magangelyo ku hesho.
Wareysiga labaad wuxuu ka dhacayaa CGRS: Rue Ernest Blerot 39, 1070 Brussels.
Waxaa si fudud loogu imaan karaa CGRS iyadoo la isticmaalayo gaadiidka dadweynaha.
Casuumaada wareysiga labaad
CGRS waxay kuugu soo diri doontaa warqad casuumaad ah boostada cinwaanka aad dooratay ama xerada qaabilaadda ee aad ku nooshahay. Haddii aad leedahay qareen/abuukaate, isaga / iyada waxay heli doontaa nuqul warqadda ah/ Koobi.
Waxaa muhiim ah inaad ku wargeliso CGRS cinwaankaaga saxda ah, si loo xaqiijyo inaad hesho warqadda casuumaadda. Haddii aad guurtay, fadlan u soo dir CGRS warqad lagu soo diray habka diiwaangashan oo uu ku qoranyahay cinwaankaaga cusub. Halkaan kala deg foomka ku habboon.
Sababo culus dartood haddii ay kaa hor istaagaan inaad timaado wareysiga, tusaale ahaan sabab la xiriirta inaad jiran tahay, waa inaad wargelisaa CGRS iyadoo aad sabab u samaneyso shahaado caddeynayso maqnaanshahaaga waqti xaddidan gudaheed ee ku qoran warqadaada casuumaadda. Weydiiso caawimaad qareenkaaga/abuukaatahaaga ama adeegaha bulshada.
Ujeedada wareysiga labaad
Wareysiga labaad waa kan ugu muhiimsan ee habsocodka magangalyada. Inta lagu jiro wareysigan, sarkaalka ilaalinta ee CGRS wuxuu ku weydiin doonaa su'aalo ku saabsan:
Xaggeed ka timid;
sidee ahayd noloshaadii wadankaga;
sideed ku timid Biljim;
sababtee ayaad uga soo tagtay wadankaga;
sababtee ayaadan ugu laaban karin wadankaga.
Dadka goobjooga ah inta lagu gudo jiro wareysiga labaad
Adiga, codsadaha ah:Si shaqsi ah ayaa loo wareysan doonaa qof walba oo codsi soo gudbistay. Haddii aad la timid Belgium lammaanahaaga ama waaridiintaada, waxaa laga laga yaabaa in hal maalin ah la idin casuumo, laakiin waxaa laguu wareysan doonaa si gooni ah. Waxa aad dooneyso inaad sheegto u sheeg si xorriyad dhameystiran. Waxa aad sheegto lalama wadaagi doono ehelkaaga haddii aadan rabin sidaas.
Wareystaha ayaa ku weydiin doona su'aalo si uu u qiimeeyo codsigaaga. Isaga / iyada waxay ku takhasuustay deegaanka aad ka soo jeedo waxayna si joogto ah u helaan tababaro kor loogu qaadayo khibradooda iyo aqoontooda. Wareystaha waxaa xaddidaya sir qarin xirfadeed.
Intii lugu guda jiray wareysigaagii koowaad ee DVZ/OE haddii aad sheegtay inaad u baahantahay turjubaan, turjubaan ayaa ka qeyb geli doona wareysiga CGRS wuxuuna bixin doonaa fasiraada asalka ah ee wax walba oo la sheego wareysiga gudihiisa. Turjubaanka waa dhexdhexaad iyo mid ka madax banaan eex, asaga / iyada waxaa xiraya sirta xirfada. Tan macnaheedu waa in turjubaanka uusan cidna u sheegi karin wixii aad u sheegtay intii lagu guda jiray wareysiga. Turjubaanka kuma lug laha go'aan qaadashada, loomana oggola inuu wax ka oggaado arrintaas.
Haddii aad dhibaato kala kulanto fahanka turjubaanka, waa inaad sheegtaa inta lagu guda jiro wareysiga.
Sidoo kale waxaad codsan kartaa inuu ku caawiyo qareen/abuukaate, taas oo ah lacag la’aan haddii aadan haysan awood dhaqaale oo kugu filan. Qareenka/abuukaataha ayaa kuu sheegi doona xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga wuxuuna hubin doonaa in wax walba ay si sax ah u dhacaan.
Wareysiga in uu joogo qareen/abuukaate qasab ma ahan. Wareysiga wuu dhacayaa xitaa haddii uusan joogin qareenkaaga, haseyeeshee qareenkaaga/abuukaatahaaga wuxuu codsan kara nuqul wareysiga ah, si uu u ogaado waxa dhacay.
Qofka lagu kalsoon yahay:
Sidoo kale waxaad dalban kartaa inuu ku caawiyo qof aad ku kalsoon tahay. Qofka lagu kalsoon yahay waa qof xirfad ku takhasusay caawinta dadka ama sharciga qaxootiga, tusaale shaqaale bulsho, cilmi nafsi yaqaan ama daweeye.
Kuma caawin karaan ehelka ama saaxiibada sidii qof lagu kalsoonyahay.
Qofka lagu kalsoon yahay waa inuu u oggolaansho ka helaa CGRS si uu uga qaybgalo wareysiga.
Wareysiga wuxuu qaadanayaa celcelis ahaan seddex ilaa afar saacadood laakiin wuu ka dheeraan ama gaabnaan karaa . Nasasho ayaa la qorsheeyey hal saac iyo bar ka dib. Waad dalban kartaa nasasho haddii aad u baahato.
Nuqul/ Koobi Wareysiga
Inta lagu guda jiro wareysiga, wareystaha ayaa wax walba ku qori doona warbixin. Waxaad dalban kartaa inaad hesho nuqul/koobi ka mid ah warbixintan, inta lagu guda jiro wareysiga ama laba maalmood gudahood ka dib wareysiga. Weydii qareenkaaga/abuukaatahaaga inuu tan kaa caawiyo. Waxaad ku heli doontaa nuqulka/koobiga oo ku qoran luuqada habsocodka magangelyo (Nederlaan ama Faransiis). Waxaad isla eegi kartaan nuqulka/koobiga adiga iyo qareenkaaga/abuukaatahaaga ama turjubaan waxaadna soo jeedin kartaan sixitaan ama ku daris.
Kaddib wareysiga labaad, CGRS waxay marka hore baaritaan ku samaysn doontaa sugnaanshaha hadaladaadii iyo dukumiintiyadaada:
Haddii hadaladaadii iyo dukumiintiyadaada lagu kalsoonaan karo, CGRS waxay hubin doontaa in dacwadaada ay hoos timaado Heshiiska Qaxootiga Geneva, si kale haddii loo dhigo waxaad qabtaa cabsi ciqaab sababo la xiriira wadanka aad u dhalatay, asalkaaga, diintaada, aragtidaada siyaasadeed ama inaad xubin ka tahay koox bulsho oo gaar ah. Waxaa intaas dheer, in aadan racfaan qaadan karin ama aadan dooneyn inaad rafcaan ka qaadato magangelyada dalka aad u dhalatay ama dalkii aad ku noolaan jirtay.
Haddii aan lagu siin karin aqoonsi qaxootinimo, CGRS ayaa baaritaan ku sameyn doontaa in lagu siiyo badbaadin dhiman. Tani waxaa kamid noqon kara haddii aad la kulmeyso qatar halis aad ku geli karto wadankaagii sababtoo ah ciqaab dil ah ama dil, jirdil, habdhaqan bina'aadanimada ka baxsan ama sharaf-dhac ah ama ciqaab ama rabshad aan kala sooc lahayn oo uu sababay dagaal.
CGRS waxay qiimeyn ku sameyn doontaa codsi kasta si iskiis ah oo dhexdhexaad ah, si waafaqsan xeerarka sharciga ah ee Biljim, Yurub iyo kuwa caalamiga ah. Marka ay qiimeyn ku sameynayso codsigaaga, CGRS waxay tixgelineysaa heerka aad joogto(da'da, taariikhda, heerka waxbarashada, jinsiga…). Haddii CGRS ay tixgeliso inaad u baahan tahay badbaado, waxaad heli doontaa sharciga badbaadada.
Labo nooc oo go'aan ah ayaa xaq kuu siinaya magangelyo iyo inaad joogto Biljim:
sharciga badbaadada dhiman.
CGRS waxay qaadanaysaa go'aan diidmo ah haddii lagu siin waayo sharciga qaxootiga ama kan badbaadada dhiman.
Haddii aadan ku raacsaneyn go'aanka ay gaartay CGRS, waxaad geyn kartaa rafcaan Golaha Dacwadda Sharciga ajnabiga (RvV/CCE). Muddada aad ku qaadan karto rafcaan waxay ku xirantahay hadba nooca go'aanka. Weydii inuu kaa caawiyo tan qareenkaaga/abuukaatahaaga. U samee si dhakhso leh sababtoo ah xilliyada qaarkood muddada rafcaanka aad ku qaadan karto ayaa aad u gaaban.
Haddii aad hayso caddayn cusub, waxaad soo gudbisan kartaa dhowr codsi oo isxigxiga waxaana ku xiran shuruudo gaar ah. Ka sii akhriso halkaan qeybta oranaysa ‘Dib u codsasho magangelyo’.